महिलामैत्री गाँउपालिका बनाउँछु: मेनुका |
महिलामैत्री गाँउपालिका बनाउँछु: मेनुका
प्रकाशित मिति :2017-07-06 17:42:17
झापाको कमल गाँउपालिकाको अध्यक्षमा मेनुका काफले निर्वाचित हुनुभयो । अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार प्रदेश नम्वर १ मा उहाँ प्रमुख पदमा निर्वाचित एक्लो महिला हुनुहुन्छ । कांग्रेसका हुकुमसिंह राईसँग बराबरी मत आएपछि गोलाप्रथाबाट काफ्ले निर्वाचित हुनुभएको हो । एमालेको प्रदेश नम्वर १ संगठन कमिटिको सदस्य समेत रहनुभएकी काफ्ले विभिन्न सामाजिक संघ सस्थामा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँसँग महिला खवरका सुनसरी संवाददाता लिलाराज भट्टराइले गर्नुभएको कुराकानी:–
कमल गाउँपालिकाको सम्बृद्धिका लागि के योजना छ ?
– यो निर्वाचनमा म एक्लो अभिमन्यू बनें । बराबरी मत पाएर पनि जितें । म गाउँपालिकालाई शुसासन र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन । जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न अगुवाई गर्छु । विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु । बाढीले वर्षेनी दुःख दिइरहेको छ । नदिबाट हुने कटान नियन्त्रणका लागि स्थानीय श्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्दै उचित कदम चाल्ने छु । अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको अधुरो कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नेर्छु । कृषिको आधुनिकिकरण, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनेछु ।
पाँच वर्ष पछि कमलगाँउपालिकामा के फरक देख्न सकिन्छ ?
– धेरै परिवर्तन हुनेछ । कृषिमा आधुनिकिकरण हुनेछ । विकासका अधुरा काम पुरा हुनेछन् । कमल गाउँ महिलामैत्री गाँउपालिकाको रुपमा चिनिएको हुनेछ । विद्यालय किशोरीमैत्री हुनेछन् । भ्रष्टाचारमुक्त गाँउपालिका हुनेछ । यो गाँउपालिका महिलाले नेतृत्व गरेको देशकै नमूना वन्ने छ । त्यो कामको म अगुवाई गर्छु ।
कमल गाँउपालिकालाई महिलामैत्री कसरी वनाउनुहुन्छ ?
– सुत्केरी आमा जसले ३५ दिनभित्रमा जन्मदर्ता गर्नुहुन्छ उहाँहरुका लागि वेविकेयरको व्यवस्था गरिनेछ । आर्थिक रुपमा महिलालाई सशक्त बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीपमुलक र व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरेर मसला, मैनवत्ति, ढाका उद्योगहरु सञ्चालन गरिनेछ । ती उद्योगहरुमा महिलालाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाइने छ । महिलालाई न्यायको पहुँचमा पुग्नका लागि सहज वातावरण वनाइने छ । राजनीतिक दलको आडमा अपराध गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिइने छैन । कमल गाउँपालिकामा महिला हिंसा गरे कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति हुनेछैन । अपराधीले सजाय पाउने छन ।
प्रदेश नम्वर १ मा एमालेले २ जना मातै महिलालाई प्रमुख पदमा उठायो, तपाईंले त जित्नु पनि भएको छ । महिलालाई विश्वास नगर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ?
– पञ्चायत ढाल्न छातीमा गोली थाप्न तयार भएर म १५ वर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा सकृय भएकी हुँ । देश र जनताको मुक्तिको लागि आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरि भूमिगत भएकी महिला हुँ । त्यो जटिल परिस्थितमा दिनरात नभनि पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गरियो । यत्रो योगदान हुँदा पनि महिलालाई सहज छैन । तर अहिले परिस्थिति सहज बन्दै गएको छ । कुनै पनि महिला जनप्रतिनिधिले कुनै पनि बेला मज्जाले काम गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधीको हैसियतले पुरुषले गर्न सक्ने सबै काम महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनतामा आएको छ । त्यसैले महिलाले आँट र हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।